समाचार - अन्तर -मौखिक सेन्सर को नयाँ पुस्ता को परिचय
अन्तर-मौखिक सेन्सर को नयाँ पुस्ता को परिचय
इन्टर मौखिक सेन्सर मूलतः प्रत्येक क्लिनिक को लागी एउटै हो?
अब सम्म, हामी सोचिरहेका छौं कि अन्तर मौखिक सेन्सर मात्र एक धेरै आधारभूत दन्त उपकरण हो कि हामीलाई बिरामीहरु को घाउ लाई अधिक नजिक बाट अवलोकन गर्न अनुमति दिन्छ।
जे होस्, जसरी स dent्ख्या र दन्त चिकित्सकहरु बीच प्रतिस्पर्धा बढ्न जारी छ, हामी अचानक "मूल कुराहरुमा फर्कने" को बारे मा सोचे।
"हामी आधारभूत को महत्व मा फर्कनु पर्छ। अन्तर मौखिक सेन्सर साना र आधारभूत तर निदान को लागी महत्वपूर्ण छन्। हामीले यस प्रतियोगिता बाट बाँच्न को लागी आधारभूत को गुणवत्ता मा अधिक ध्यान दिनु पर्छ।
के तपाइँ साँच्चै तपाइँको सेन्सर संग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
एक intraoral सेन्सर को उपयोग गरेर सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो?
धेरै बिरामीहरु लाई एक असहज महसुस हुन्छ जब एक कडा र कठोर सेन्सर आफ्नो गिजा र मुख मा परेशान गर्दछ। गम्भीर अवस्थामा, केहि बिरामीहरु gagging अन्त।
यो मुद्दा लामो समय देखि दन्त क्लिनिक को एक "प्राकृतिक" भाग भएको छ, तर हामी "प्राकृतिक" मा सुधार गर्न आवश्यक छ।
महत्वपूर्ण सुविधाहरु सबै भन्दा राम्रो आराम प्रदान गर्दछ।
हाम्रो आर्क को सामान्य आकार वर्ग छैन, तर गोल छ। Incisor क्षेत्र को लागी, दाँत को झुकाव व्यक्ति देखि व्यक्ति फरक हुन सक्छ, र छवि हामी देख्छौं फ्लैट छ जबकि एक मानव आर्क तीन आयामी छ।
यही कारणले एक कठोर र फ्लैट सेन्सर संग एक स्पष्ट अन्तर मौखिक छवि प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
हामीले अनुभव मा जवाफ पाएका छौं।
बिरामी आराम तिर बाटो मा, आराम उन्मुख नवाचार शुरू भएको छ। र हामीले अन्त मा सोचे कि सबै नवाचारहरु अनुभव बाट आउँछ। हाम्रो प्रक्रिया मा रोगी आराम मा मद्दत गर्न को लागी, हामीले अनुभव सिक्यौं कि नवीनता लाई मद्दत गर्दछ।
यसलाई नरम बनाएर, हामी यो नवाचार सबै भन्दा राम्रो आराम को लागी तपाइँको अभ्यास मा ल्याउनेछौं।
अब, सफ्ट सेन्सर को उत्पादन शुरू भएको छ। विस्तार मा परिवर्तन तपाइँ धेरै लाभहरु ल्याउनेछन्।
आफ्नो चिन्ता शान्त र मात्र तपाइँको अभ्यास मा ध्यान केन्द्रित!
त्रुटिहरु बाट मुक्त हुन चाहानुहुन्छ?
तपाइँ र तपाइँको स्टाफ तपाइँको बिरामी संग बहुमूल्य समय बर्बाद हुनेछ जब यी त्रुटिहरु हुन्छन्, र तपाइँको निदान संग एक हस्तक्षेप को कारण।
अनुकूलित स्थिति छवि अधिग्रहण को लागी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुञ्जी हो
EzSensor नरम आर्क को लागी आकार छ।
एक सामान्य कठोर सेन्सर premolar र दाढ क्षेत्रहरु को लागी स्थिति गर्न को लागी कठिन छ, जबकि EzSensor नरम संग, तपाइँ सजिलै संग यसको गोलाकार किनारा डिजाइन र स्थिति गर्न सक्नुहुन्छ।
सिलिकॉन सामाग्री प्रयोग को दौरान anatomically फिट गर्न को लागी।
जसरी यो बिरामीको गोलाकार चाप बिस्तारै संग जोडिएको छ, ergonomically घुमाइएको आकार मुख मा फिसल्न सेन्सर रोक्छ। यो मात्र मद्दत गर्दैन बिरामीहरुलाई कम दुखाई महसुस हुन्छ।
नरम किनारहरु लुकेको क्षेत्र प्रकट
EzSensor नरम को नरम किनारा तपाइँको स्टाफ स्थिति सेन्सर भन्दा पहिले भन्दा सजिलो र एक्स-रे स्रोत संग पment्क्तिबद्ध राम्रो संग तदनुसार समायोजित गर्न दिनुहोस्।
यो प्रत्येक दाँत को बीच ओवरलैप घटाउँछ, र एक परिणाम को रूप मा, तपाइँ छवि मा लुकेको क्षेत्र जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
EzSensor नरम तपाइँ र तपाइँको टीम एक सटीक निदान गर्न दिन्छ।
नरम स्पर्श परम रोगी आराम सुनिश्चित गर्दछ
Biocompatible सिलिकॉन संग तातो महसुस गर्दै
सेन्सर एक नरम बाहिरी र केबल संग एक Uni शरीर संग डिजाइन गरीएको छ।
EzSensor नरम रोगी उन्मुख डिजाइन साना मेहराब को लागी उपयुक्त छ।
Ergonomically गोल र किनारा काट्नुहोस्
हरेक डाक्टर संवेदनशील बिरामी छन्। जस्तै…
Mandibular torus (pl। Mandibular tori) जिब्रो को नजिकैको सतह संगै mandible मा एक हड्डी बृद्धि हो। Mandibular टोरी सामान्यतया premolars को नजिकै र अनिवार्य मा mylohyoid मांसपेशी को लगाव को स्थान माथि उपस्थित छन्।
विशेष गरी, केहि बिरामीहरु आफ्नो दुखी टोरी को कारण गम्भीर दुखाइ र gagging को माध्यम बाट जान सक्छन्।
डाक्टरहरु लाई अधिक ध्यान दिनु पर्छ जब स्थिति। EzSensor नरम रोगीहरु को यस प्रकार को लागी यसको कोमलता को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ।
यसबाहेक, हाम्रो 'EzSoft' शंकु सूचक रोगी आराम र सेन्सर स्थिति अधिकतम गर्न डिजाइन गरीएको छ।
नरम पंजा तपाईं ठीक तनाव र कडा काट्ने ब्लक र हात समायोजन गर्न दिन्छ masticatory बल को बिरूद्ध यसको मूल कोण ('०') बनाए राखेर स्थिति सटीकता सुनिश्चित गर्दछ।
फरक छवि गुणस्तर अनुभव
पायस खरोंच र प्लेट स्क्यानिंग ढिलाइ पिक्सेल तीव्रता गिरावट र occlusal क्षय पत्ता लगाउने क्षमता मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव छ।
EzSensor नरम को उच्च छवि गुणवत्ता उच्च परिभाषा र एक ३μ.llp/मिमी को एक १४.μ माइक्रोन पिक्सेल आकार संग सम्बन्धित सैद्धांतिक संकल्प को माध्यम बाट ग्यारेन्टी छ। शोर र विरूपण साक्ष्य दमन संग, EzSensor नरम सबैभन्दा स्पष्ट र सुसंगत छविहरु प्रदान गर्दछ।
पिक्सेल आकार 30 माइक्रोन (उच्च) 60 माइक्रोन (कम) 23 माइक्रोन (उच्च) 30 माइक्रोन (कम) 14.8 माइक्रोन
शीर्ष वर्ग स्थायित्व - ड्रप प्रतिरोधी
EzSensor नरम सबैभन्दा टिकाऊ सेन्सर उपलब्ध छ। सामान्यतया, जब एक सेन्सर गल्तीले छोडियो वा मा राखिएको छ, यो क्षति को लागी succumbs।
EzSensoft को नरम रबर जस्तै बाहिरी कि रोक्न मद्दत गर्न सक्छ! यो बाढी जस्तै छोड्ने र यस प्रकार क्षति को जोखिम लाई कम गर्न सक्छ।
तपाइँ तपाइँको EzSensor नरम सजीलो संग सजीलो संग सफा राख्न सक्नुहुन्छ।
शीर्ष वर्ग स्थायित्व - बाइट प्रतिरोधी
माथिको छवि उत्पादन विकास चरण मा लिईएको एक काट्ने परीक्षण हो। यस परीक्षण मा, हामी १०० पटक को लागी ५० एन को बल लाई सेन्सर को लागी दुबै माथी र तल दिशानिर्देशनमा लागू गर्यौं। यो परीक्षण दाँत masticatory आन्दोलन को एक प्रयोगात्मक प्रजनन हो।
प्रयोग को नतिजा को रूप मा, यो स्थापित भएको थियो कि EzSensor नरम क्षतिग्रस्त छैन, भले ही 50 एन (लगभग5kgf) को एक बल, जो masticatory बल भन्दा ठूलो छ, थियो
शीर्ष वर्ग स्थायित्व - केबल झुकाउने
जस्तै सेन्सर को केबल अक्सर दाँत को एक अन्तर मौखिक छवि लिन संग हस्तक्षेप, त्यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरु जो एक विशिष्ट दिशा मा केबल को उपयोग गरीरहेछन्। यो समस्या को हल गर्न को लागी, हामी एक केबल झुकाउने परीक्षण को रूप मा झुकाउने माथि, तल, बायाँ, दायाँ विकास को चरण मा आयोजित। विशेष गरी, सेन्सर को तनाव राहत (केबल र सेन्सर मोड्युल को बीच कनेक्शन) पर्याप्त टिकाऊ हुन को लागी डिजाइन गरीएको छ।
प्रवेश, ठोस, तरल संरक्षण को उच्चतम स्तर
प्रवेश संरक्षण पहिलो अंक: ठोस संरक्षण दोस्रो अंक: तरल संरक्षण
EzSensor सफ्ट रेटेड IP68, जो सेन्सर वर्गीकृत गर्दछ धूल बाट सम्पर्क को बिरुद्ध पूर्ण सुरक्षा र दबाव मा विसर्जन को लामो अवधि को लागी। सुरक्षा को यो स्तर संग, सेन्सर यस्तो Streptococcus Mutans र Mycobacterium क्षयरोग जस्तै सूक्ष्मजीवहरु बाट नसबंदी को लागी बाँझो मा भिजाउन सकिन्छ।
अनुकूलित स्थिति तपाइँ समय दक्षता प्रदान गर्दछ
प्रक्रिया समय फरक: Intraoral सेन्सर बनाम। फिल्म र आईपीएस
सामान्य मा, यो १ minutes मिनेट (60 sec० सेकेन्ड) एक हेर्न को लागी लिन्छ
फिल्म छवि। आईपीएस को लागी, अधिकतम १7 सेकेन्ड। ह्यान्डलिंग र स्क्यानि for (स्क्यानर प्रशोधन) को लागी अन्तिम हेर्नु भन्दा पहिले आवश्यक छ
रेडियोग्राफिक छवि को। जे होस्, इन्ट्रा मौखिक सेन्सर मात्र तीन चरणहरु को आवश्यकता छ - सेटिंग, स्थिति, र जोखिम - छवि को निगरानी गर्न को लागी र यी3चरणहरु कुल मा लगभग २० सेकेन्ड लिन्छन्। डाक्टरहरु EzSensor नरम संग अधिक समय बचाउन सक्नुहुन्छ, यो सजीलै संग अनुकूलित स्थिति प्रदान गर्दछ।
को एक स्वच्छ, आधुनिक र विशाल क्लिनिक चाहँदैनन्?
फिल्म प्रयोगकर्ताहरु लाई फिल्म भण्डारण को लागी भौतिक ठाउँ र एक अँध्यारो कोठा को रासायनिक एक्स-रे फिल्म छविहरु को प्रक्रिया को लागी आवश्यक छ। जे होस्, intraoral सेन्सर को मामला मा, डाक्टरहरु लाई मात्र एक पीसी को लागी एक सानो ठाउँ को जरूरत छ र छविहरु लाई हेर्न को लागी निगरानी।
चिकित्सकहरु एक बिरामी को मा अँध्यारो कोठा र फाइल भण्डारण कोठा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ
प्रतीक्षा कोठा वा एक स्वागत ठाउँ।
पोस्ट समय: मई-13-2021